Tevedzera Mwari Pakuratidza Rudo, Mutsa Uye Uchenjeri | Yokudzidza
SARUDZA MUTAURO Acholi Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Fijian Finnish French Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kamba Kannada Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuRussia Ndebele (Zimbabwe) Nepali Norwegian Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tshiluba Turkish Turkmen Turkmen (Cyrillic) Tuvaluan Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Yoruba Zande Zapotec (Isthmus)
Jesu akatevedzera sei unhu hwaJehovha?
Tingatevedzera sei unhu hwaJehovha hwakadai serudo?
Nei tichifanira kushanda nesimba kuti tidzore mafungiro edu?
1. Chipo chipi chinogona kutibatsira kutevedzera unhu hwaMwari?
JEHOVHA akatipa chipo chokukwanisa kufungidzira manzwiro anoita vamwe vanhu kunyange tisina kumbobvira tasangana nezvinhu zvavari kusangana nazvo. (Verenga VaEfeso 5:1, 2.) Tingashandisa sei zvakanaka chipo ichi chatakapiwa naMwari? Tingaita sei kuti tisakanganiswa nacho?
2. Jehovha anonzwa sei nematambudziko atinosangana nawo?
2 Tinofara chaizvo kuti Mwari akavimbisa vakazodzwa kuti vachanorarama kudenga vasingafi uye kuti “mamwe makwai” aJesu akavimbika achawana upenyu husingaperi panyika. (Joh. 10:16; 17:3; 1 VaK. 15:53) Vakazodzwa ava ‘nemamwe makwai’ havazosangani nematambudziko ari kusangana nevanhu mazuva ano. Jehovha anonzwisisa matambudziko atinosangana nawo sekunzwisisa kwaaiita matambudziko aisangana nevaIsraeri pavaiva varanda muIjipiti. Chokwadi, “pakutambudzika kwavo kwose naiyewo akanga achitambudzika.” (Isa. 63:9) Papera mazana emakore, vaJudha pavaivakazve temberi, vakatanga kutya nokuti vavengi vavo vaivatyisidzira, asi Mwari akati: “Anokugunzvai anogunzva mboni yeziso rangu.” (Zek. 2:8) Kungofanana naamai vanonzwira tsitsi mwana wavo, Jehovha anonzwirawo tsitsi vashumiri vake uye anoda kuvabatsira. (Isa. 49:15) Patinofungidzira tirisu tiri kusangana nematambudziko ari kusangana nevamwe, tinenge tichiratidza rudo serwaJehovha.—Pis. 103:13, 14.
JESU AKATEVEDZERA SEI RUDO RWAMWARI?
3. Chii chinoratidza kuti Jesu ainzwira vamwe tsitsi?
3 Jesu ainzwisisa kurwadziwa kwaiita vamwe, kunyange zvazvo iye asina kumbosangana nematambudziko avaisangana nawo. Somuenzaniso, vanhu vaitya vatungamiriri vechitendero avo vaiva neunyengeri uye vaivaremedza nemitemo yavo yakawanda. (Mat. 23:4; Mako 7:1-5; Joh. 7:13) Jesu akanga asingatyi vatungamiriri ivavo uye haana kumbonyengerwa navo, asi aikwanisa kunzwisisa manzwiro aiita vanhu vaibatwa saizvozvo. Saka paakaona “mapoka evanhu akasiririswa navo, nokuti vaibatwa zvisina kunaka uye vakanga vakapararira kufanana nemakwai asina mufudzi.” (Mat. 9:36) Jesu aida vanhu uye aivanzwira tsitsi kungofanana naBaba vake.—Pis. 103:8.
4. Jesu akaitei paaiona vanhu vachitambura?
4 Jesu paaiona vanhu vachitambura, aivabatsira nokuti aivada. Paaivabatsira, ainyatsotevedzera rudo rwuna Baba vake. Pashure pokunge vafamba daro rakareba vachiparidza, Jesu nevaapostora vake vainge vava kuda kuenda kwavo voga kuti vambonozorora. Asi pavakasvika kunzvimbo yavaida kunozorora vari, Jesu akaona vanhu vakamumirira. Akasiririswa navo, ndokutanga “kuvadzidzisa zvinhu zvizhinji.”—Mako 6:30, 31, 34.
TINGATEVEDZERA SEI RUDO RWAJEHOVHA?
5, 6. Kuti titevedzere rudo rwaMwari, tinofanira kubata sei muvakidzani wedu? Taura muenzaniso. (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
5 Tinogona kutevedzera rudo rwaMwari nemabatiro atinoita muvakidzani wedu. Somuenzaniso: Ngatitii muKristu wechiduku anonzi Alan ari kufunga nezvehama yakura yava kunetseka nokuverenga nokuti haichanyatsoona. Yava kunetsekawo nokuenda kunoparidza paimba neimba. Alan anobva ayeuka mashoko aJesu okuti: “Zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.” (Ruka 6:31) Saka Alan anozvibvunza kuti, ‘Chii chandinoda kuti vanhu vandiitire?’ Anoti, ‘Ndinoda kuti vatambe neni bhora!’ Asi hama iyi yakwegura haichagoni zvekutamba bhora. Mashoko aJesu anoratidza kuti tinofanira kuzvibvunza kuti, ‘Zvii zvandaizoda kuti muvakidzani wangu andiitire kudai ndaiva iye?’
6 Alan haasati akwegura, asi anogona kufungidzira manzwiro aaizoita kudai akwegura. Anowana nguva yekuva nehama yacho, onyatsoiteerera painenge ichitaura. Alan anotanga kuona kuti zvakaoma sei kuti munhu akwegura averenge Bhaibheri kana kuti afambe achiparidza paimba neimba. Paanenge ava kunyatsonzwisisa kuti hama iyi yakwegura inotambudzika sei, anobva aona kuti inoda kubatsirwa papi uye anoda kuibatsira. Nesuwo tinogona kudaro. Kuti titevedzere rudo rwaMwari, tinofanira kuona kutambura kunenge kuchiita hama yedu sekuti ndisu tiri kutotambura.—1 VaK. 12:26.
Tevedzera Jehovha nokuratidza rudo (Ona ndima 7)
7. Tingaitei kuti tinzwisise zviri kunetsa hama dzedu?
7 Dzimwe nguva hazvisi nyore kunzwisisa matambudziko ari kusangana nevamwe kunyanya kana tisina kumbobvira tasanganawo nematambudziko iwayo. Vamwe vari kutambura nokuti vakakuvara mutsaona, vanorwara, kana kuti vakwegura. Vamwe vanogara vachirwisana nepfungwa dzinoshungurudza dzinokonzerwa nokuora mwoyo, kutya zvakanyanya, kana kuti kubatwa zvakaipa kwavakamboitwa. Vamwe vari mumhuri ine vamwe vasingashumiri Jehovha kana kuti ine mubereki mumwe chete. Tose tinosangana nematambudziko, asi kakawanda matambudziko acho haafanani. Saka tingatevedzera sei rudo rwaMwari? Tinofanira kunyatsoteerera mumwe munhu paanenge achitaura toedza kunzwisisa kuti zvii zviri kumunetsa. Izvi zvichaita kuti titevedzere rudo rwaJehovha, tomubatsira. Vanhu vanoda kubatsirwa nenzira dzakasiyana-siyana, asi tine zvatinokwanisa kuvaitira vose. Tinokwanisa kuvakurudzira pakunamata uye kuvabatsira nedzimwe nzira.—Verenga VaRoma 12:15; 1 Petro 3:8.
IVA NEMUTSA SEWAJEHOVHA
8. Chii chakabatsira Jesu kuti aratidze vamwe mutsa?
8 Mwanakomana waMwari akati: “Wokumusorosoro . . . ane mutsa kune vasingaongi nevakaipa.” (Ruka 6:35) Jesu aitotevedzera Jehovha pakuratidza mutsa. Chii chakabatsira Jesu kuti adaro? Aitanga afunga kuti zvaaida kutaura kana kuita zvaizoita kuti mumwe munhu anzwe sei. Somuenzaniso, mumwe mukadzi aizivikanwa semutadzi akauya kwaari, akatanga kuchema uye akanyorovesa tsoka dzaJesu nemisodzi. Jesu akanzwisisa kuti mukadzi uyu akanga apfidza uye aiziva kuti mukadzi wacho aizorwadziwa kudai akamudzinga. Saka akamurumbidza uye akamukanganwira. Mumwe muFarisi paasina kufara nazvo, Jesu akataurawo naye zvine mutsa.—Ruka 7:36-48.
9. Chii chichatibatsira kutevedzera mutsa waMwari? Taura muenzaniso.
9 Tingatevedzera sei mutsa waMwari? Muapostora Pauro akanyora kuti: “Muranda waShe haafaniri kurwa, asi anofanira kuva norupfave kuna vose.” (2 Tim. 2:24) Munhu ane rupfave haadi kurwadzisa vamwe, saka anotanga afunga asati ataura kana kuita chimwe chinhu. Funga kuti ungaratidza sei mutsa mumamiriro ezvinhu anotevera: Maneja wako haasi kunyatsoita basa rake nemazvo. Uchaita sei? Imwe hama yauya kumisangano pashure pemwedzi yakawanda isingauyi. Uchati kudii kwairi? Paunenge uri muushumiri, saimba anoti, “Iye zvino ndakabatikana.” Ucharatidza kunzwisisa here? Paunenge uri kumba, wawakaroorana naye anoti, “Nei usina kunditaurira kuti une zvawakaronga kuita pakupera kwevhiki?” Uchapindura nemutsa here? Kana tikafungidzira tiri isu vanhu ivavo, toedza kuona kuti mashoko edu achaita kuti vanzwe sei, tichakwanisa kuziva zvatinofanira kutaura uye kuita, kuti tive nemutsa sewaJehovha.—Verenga Zvirevo 15:28.
TEVEDZERA UCHENJERI HWAMWARI
10, 11. Chii chinotibatsira kuti titevedzere uchenjeri hwaMwari? Taura muenzaniso.
10 Kukwanisa kwedu kufungidzira zvakaita zvinhu zvatisati tambosangana nazvo kunogonawo kutibatsira kutevedzera uchenjeri hwaJehovha, toona kuti zvatinosarudza zvingaguma nei. Jehovha akachenjera chaizvo, uye kana achida, anogona kusarudza kuziva zvichaitika mune ramangwana. Isu hatigoni kuita izvozvo, asi tinogona kufungidzira kuti zvatinenge tava kuda kuita zvinogona kuguma nei. VaIsraeri vakatadza kufungidzira zvaigona kupedzisira zvaitika kana vakasateerera Mwari. Pasinei nezvose zvavakanga vaitirwa naMwari, Mosesi aiziva kuti vaizotadzira Jehovha. Mune imwe nziyo yaakaimba ungano yose yaIsraeri ichinzwa, Mosesi akati: “Ivo rudzi rusingafungi, pakati pavo hapana kunzwisisa. Haiwa, kudai vakachenjera! Vaizofungisisa nezveizvi. Vaizofunga nezvokuguma kwavo.”—Dheut. 31:29, 30; 32:28, 29.
11 Kuti titevedzere uchenjeri hwaMwari, tinofanira kufungidzira kuti zvatiri kuda kuita zvichaguma nei. Somuenzaniso, kana uine mumwe munhu wauri kudanana naye unofanira kuyeuka kuti chido chokuda kuita zvebonde chinogona kukukurira. Saka hamufaniri kuronga kana kuita zvinhu zvinogona kukanganisa ushamwari hwenyu hunokosha naJehovha. Asi teererai zano iri rakafemerwa rokuti: “Munhu ane njere anoona dambudziko ovanda, asi vasina zivo vanongopfuura havo vorangwa.”—Zvir. 22:3.
USAFUNGIDZIRA ZVINHU ZVAKAIPA
12. Zvatinofungidzira zvinogona kutikanganisa sei?
12 Munhu akachenjera anoziva kuti kufungidzira kunogona kufananidzwa nemoto. Kana moto ukashandiswa zvakanaka, unogona kubatsira pazvinhu zvakadai sekubika. Asi kana ukasashandiswa zvakanaka, unogona kupisa imba uye kuuraya vanhu varimo. Ndozvazvakangoitawo nekufungidzira zvinhu. Kunotibatsira kana kuchiita kuti titevedzere Jehovha. Asi kunogona kutikanganisa kana kuchiita kuti tive nepfungwa dzokuda kuita unzenza. Somuenzaniso, kana tikava netsika yekufungidzira tichiita zvakaipa, tinogona kupedzisira tazviita. Izvi zvinogona kukanganisa ushamwari hwedu naJehovha!—Verenga Jakobho 1:14, 15.
13. Evha angangodaro akafungidzirei?
13 Funga kuti chii chakaita kuti mukadzi wokutanga, Evha, ave nepfungwa yokudya muchero wakanga warambidzwa womuti “wokuziva zvakanaka nezvakaipa.” (Gen. 2:16, 17) Nyoka yainge yamuudza kuti: “Chokwadi hamungafi. Nokuti Mwari anoziva kuti zuva ramuchaudya, maziso enyu achasvinudzwa uye muchava vakafanana naMwari, muchiziva zvakanaka nezvakaipa.” Evha “akaona kuti muti wacho wakanga wakanakira kudya uye kuti wakanga uri chimwe chinhu chinoyevedza.” Zvakaguma nei? “Akatanga kutora michero yawo achidya. Akazopawo murume wake paakanga ava naye, akatanga kuudya.” (Gen. 3:1-6) Evha anofanira kunge akatorwa mwoyo nezvaakaudzwa naSatani. Akatanga kufungidzira achizvisarudzira zvakanaka nezvakaipa, asina anomuudza zvokuita. Kufungidzira ikoko kwakakonzera matambudziko akakura chaizvo! Nemhaka yokutadza kwemurume wake, Adhamu, ‘chivi chakapinda munyika uye rufu rwakapinda nechivi.’—VaR. 5:12.
14. Bhaibheri rinotibatsira sei kuti tisaita unzenza?
14 Chivi chakaitwa naEvha mumunda weEdheni chakanga chisinei nenyaya dzebonde. Zvisinei, mashoko akataurwa naJesu anoratidza kuti hatifaniri kuramba tichifungidzira tichiita unzenza. Akati: “Munhu wose anoramba akatarira mukadzi zvokuti anomuchiva atoita upombwe naye mumwoyo make.” (Mat. 5:28) Pauro akanyeverawo kuti: “Musafanorongera kuchiva kwenyama.”—VaR. 13:14.
15. Tinofanira kuunganidza pfuma yakaita sei uye nei?
15 Kumwe kufungidzira kwakaipa ndekwekuzviona tava nepfuma yakawanda, asi tichikanganwa Mwari. Munhu akapfuma ‘anofungidzira kuti pfuma yake yakaita sorusvingo runodzivirira.’ (Zvir. 18:11) Jesu akataura nyaya yairatidza upenzi hwomunhu “anozviunganidzira pfuma asi asina kupfuma kuna Mwari.” (Ruka 12:16-21) Jehovha anofara patinoita zvinhu zvinomufadza. (Zvir. 27:11) Kuziva kuti Jehovha ari kufara patinounganidza “pfuma kudenga,” kunoitawo kuti tifare! (Mat. 6:20) Uyewo hapana imwe pfuma inokosha kupfuura kuva neushamwari naJehovha.
USARAMBA UCHIZVIDYA MWOYO
16. Chii chatingaita kuti tisanyanya kuzvidya mwoyo?
16 Kana tikati sika sika nokuda “kuzviunganidzira pfuma panyika,” tichazvidya mwoyo chaizvo. (Mat. 6:19) Jesu akataura mufananidzo unoratidza kuti “kuzvidya mwoyo nezvinhu zvomumamiriro ezvinhu epanguva ino nesimba rinonyengera repfuma” zvinogona kuvhunga shoko roUmambo. (Mat. 13:18, 19, 22) Vamwe vanogara vachizvinetsa nokufungidzira matambudziko asati aitika, angava emari kana mamwewo. Zvisinei, kana tikagara tichinetseka saizvozvo, zvinogona kutikanganisa pakushumira Jehovha kana pautano hwedu. Ngativimbei naJehovha uye toyeuka kuti “kuzvidya mwoyo kuri mumwoyo momunhu ndiko kuchaukotamisa, asi shoko rakanaka ndiro rinoita kuti ufare.” (Zvir. 12:25) Tinogona kufara kana tikakurudzirwa nemumwe munhu anotinzwisisa. Hatizonyanyi kunetseka kana tikaudza mumwe munhu zviri kutsi kwemwoyo, angava watakaroorana naye, mubereki kana kuti shamwari yatinovimba nayo, inoona zvinhu semaonerwo azvinoitwa naMwari.
17. Jehovha anotibatsira sei patinenge tiine zviri kutinetsa?
17 Jehovha chete ndiye anonyatsonzwisisa zviri kutinetsa. Pauro akanyora kuti: “Musazvidya mwoyo pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, asi muzvinhu zvose kukumbira kwenyu ngakuziviswe Mwari nokunyengetera nokuteterera pamwe chete nokuonga; uye rugare rwaMwari runopfuura kufunga kwose rucharinda mwoyo yenyu nesimba renyu rokufunga pachishandiswa Kristu Jesu.” (VaF. 4:6, 7) Jehovha anotibatsira kuti tirambe tiine ushamwari hwakasimba naye. Anoita izvozvo achishandisa vatinonamata navo, vakuru, muranda akatendeka, ngirozi uye Jesu.
18. Kufungidzira kunotibatsira sei?
18 Taona kuti kana tikaedza kufungidzira manzwiro anoita vamwe, tichakwanisa kutevedzera unhu hwaMwari hwakadai sorudo. (1 Tim. 1:11; 1 Joh. 4:8) Tichafara chaizvo kana tikada vamwe uye tikavaitira mutsa, tikafunga kuti zvatichaita zvichaguma nei, uye tikasagara tichizvidya mwoyo. Saka ngatishandisei zvakanaka chipo chatakapiwa naMwari kuti tifungidzire tariro yatinayo uye totevedzera Jehovha pakuratidza rudo, mutsa, uchenjeri uye mufaro.—VaR. 12:12.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Tevedzera Jehovha Uyo Anovimbisa Upenyu Husingaperi
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2015
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA May 2015